Citizenship by Investment Unit (CIU) inopa kurudziro kuKabineti kuti igamuchire mabhizinesi, angave aripo kana akarongwa, kuitira mari yekudyara mubhizinesi pasi peCitizenship neInvestment Chirongwa.
Kamwe kupihwa mvumo yekudyara bhizinesi kwapihwa, iyo CIU inozotarisa zvikumbiro zvekuva mugari wenyika. Maitiro ekunyorera akafanana neayo eiyo NDF, kureva kuti, kana uchinge waendesa chikumbiro chako unozokumbirwa kubhadhara mari yekushingairira uye 10% yemari inoshandiswa nehurumende. Pakugamuchira tsamba yekutenderwa iwe unozobvunzwa kubhadhara iyo bharanzi yehurumende yekugadzirisa fizi uye yako bhizinesi mari yekudyara mukati memazuva makumi matatu. Nekuda kwekugona kwakasiyana kwenzvimbo dzekudyara dzakadai chero chibvumirano che escrow chinotauriranwa pakati pemapato asi kuchinjiswa kwemari yekudyara kunofanirwa kuitwa mukati memazuva makumi matatu kubva pakaburitswa tsamba yekutendera.
Shanyira Embassy, ​​High Commission kana Consular Hofisi yeAntigua neBarbuda kunotora pasipoti yako uye kutora mhiko kana kusimbiswa kwekuvimbika. Batanidza kuma Embassies / Makomisheni Epamusoro / Mahofisi eVamiriri anoratidzwa pane rimwe peji.